Shiinaha kartoo kartuun kartoon dugsiga-saareyaasha, shirkado, warshad - xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Bacda dugsiga > Bacda iskuulka ee kartoonada
Boorsada iskuulka ee caruurtu waxay leedahay astaamo u gaar ah biyuhu, culeyska fudud, nuugista shoogga, xirashada caabbinta, cimriga dheer ee adeegga, iyo shaqooyin badan. iftiinka iftiinka habeenkii si ilmahaaga loo siiyo badbaado badbaado oo dheeri ah.
Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003. Ganacsigeena ugu weyni waa nashqadeynta, soosaarka iyo iibinta alaabada boorsada, sida: boorsooyinka laptop-ka, boorsooyinka iskuulka ardayda, boorsooyinka iskuulka, bacda xafaayada, boorsooyinka dibada, boorsooyinka isboortiga, rucksacks, boorsooyinka iskuulka kartoonada iyo alaabada kale. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ballaarineynaa ganacsiyada kale, sida soosaarka Naqshadeynta: bacaha suunka, boorsooyinka duffel, boorsooyinka gacanta, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka qadada, bacaha qoryaha, boorsooyinka taatikada ee militariga, boorsooyinka xayawaanka iyo waxyaabaha kale. Si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee badeecadaha ee Shiinaha. Shiinaha dhexdiisa, waxaan leenahay silsilad xoog leh oo qaan gaar ah oo kor u kacsan iyo silsilad saadka oo hoos mara Tani waa faa'iidadayada ugu muhiimsan. Faa'iidadan awgeed, waxaan ugu adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna si dhakhso leh, ka wanaagsan oo ka wanaagsan, oo waxaan u siin karnaa macaamiisheenna adeegyo wax-soo-saar tayo sare leh oo tayo sare leh, waxaan sidoo kale macaamiisha ku siin karnaa badeecooyinkeena noocyada asalka ah oo tayo sare leh. Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen u ilaashan karnaa booskeena hogaaminta? Waxaan mudnaan siineynaa isku xirka dadka, waxaana muhiimada koowaad siineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 mitir murabac ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab wax soo saar iyo shaqaale wax soo saar badan, isla markaana aan u siino macaamiisha adeegyo ka imaado naqshadeynta wax soo saarka, soosaarka muunada, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, iyo bayaanka kastamka. Haddii aad u baahato inaad habeyso alaabada boorsada ama aad metesho astaanteena, fadlan nala soo xiriir: (ku qor halkan emailka shirkadda, guji si aad wax uga beddesho emaylka)
Hordhaca badeecada kartoonka iskuulka:
(1) Dharka kore ee shandada iskuulka ee kartoonada caruurta wuxuu ka samaysan yahay maro naylon oo cufan leh Maadadani waxay leedahay xoog silibis adag iyo adkeysi abrasion. Cufnaanta sare ee dharka iyo dahaadhka biyaha celiya ayaa si wax ku ool ah uga hortagi kara roobka qoyan bacda. Gudaha, isku-dhafkan wuxuu leeyahay waxqabad aan biyuhu wanaagsanayn, oo wuxuu leeyahay bilic sharaf leh. Waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4.
(4) Jiinyeerka sheyga ayaa ah qaybta ugu muhiimsan. Tayada sheybaarka ayaa go'aaminaya heerka wax soosaarka, sidaa darteed boorsada iskuulka ee caruurtu ku shaqaysato waxay isticmaashaa jiinyeerka YKK ee aadka loo yaqaan iyo sumcadda caanka ah ee Shiinaha ee SBS.
(5) Boorsadeena iskuulka ee kartuunku waa neefsasho, u adkeysi-xirnaan iyo biyo-la'aan.
(6) Waa jilicsan tahay, neefsan karto oo aan cufan lahayn, qaab dhismeedka malabka ee saddex-geesoodka ah ayaa ilmaha dhabarkiisa ka dhigaya mid waaraya, raaxo leh oo qallalan.
(7) Naqshad fudud, oo u dhiganta miisaanka tufaaxa, taas oo u sahlaysa carruurta inay dugsiga aadaan.
2. Xaddidyada alaabta (qeexitaannada) shandadaha iskuulka ee kartoonnada ah
Caruurta boorsada iskuulka kartoon
Dhererka 24cmX Width 13cmX Dhererka 31cm
Waxaa lagula talinayaa carruurta ka yar 1.1 mitir.
3. Sifooyinka alaabta iyo codsiyada shandadaha iskuulka ee kartoonada ah
(1) Shandada iskuulka ee kartoonada caruurtu waxay leedahay astaamaha biyuhu, xamuulka fudud, nuugista shoogga, iska caabbinta, nolosha adeega dheer, iyo shaqooyinka badan.
(2) Markaad u safreyso iskuulka, boorsada ayaa xasuusin doonta darawalka ama dadka wadada maraya iftiinka xoogan ee habeenkii si ilmahaaga loo siiyo badbaado badbaado oo dheeri ah.
5. Baakadaha kartoonada iyo keenista
(2) Wareegga oraahda dufcaddu waa 2-3 maalmood oo shaqo. Hal shey ayaa la soo xigtay 12 saacadood
Calaamadaha kulul: Boorsada iskuulka ee Kartoonada, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka